Tag: anotsanangura mavhidhiyo | Martech Zone
Tag: anotsanangura mavhidhiyo
Isu tinotsvaga, kunyora uye kugadzira mavhidhiyo ehupenyu kune vatengi vedu uye ingave yakaoma maitiro. Kunyange ivo vaine kudzoka kunoshamisa mukudyara, makambani mazhinji haakwanise kubhadhara zviuru zvemadhora pane yakakura mifananidzo. Wideo.co yakagadzira online animated vhidhiyo yekugadzira chikuva kuti ipe inokwanisika mhinduro pakati. Iwe unogona kuyedza chikuva iwe pachako, uchigadzira yemahara animated vhidhiyo neimwe yavo matemplate avanopa. Matemplate anosanganisira bhizinesi, kupemberera, demo,
Kana tichiti vhidhiyo yave chikamu chakakosha chehupenyu hwedu hwezuva nezuva, hatisi kutamba. Isu tinoona mavhidhiyo epamhepo zuva rega rega pamakomputa edu, nhare uye kunyangwe Smart TV. Zvinoenderana neYouTube, huwandu hwemaawa anoshandiswa nevanhu vachiona mavhidhiyo hwave pamusoro pe60% gore kupfuura gore! Zvinyorwa-chete-zvakavakirwa mawebhusaiti zvave zvechinyakare, uye hatisi isu tega vanozviti: Google ndiyo! Injini yekutsvaga yepasirose # 1 inopa kukoshesa zvakanyanya zvemavhidhiyo, izvo zvine
Vashambadzi vanoona kuti mavhidhiyo anotendera kubatana kwemanzwiro uye kutsanangudza mavhidhiyo ari masekondi makumi matatu kusvika pasi pemaminetsi maviri inzira inonakidza yekuunganidza pfungwa nekuvandudza shanduko. Vhiki rapfuura chete, waaishanda naye Andrew Angle akamira nehofisi yedu ndokutiudza kuti anga achinakidzwa nekushanda neGoAnimate uye kuti angave anoshanda here kana kwete. Mazuva mashoma gare gare, ndanga ndichiona kuratidzwa kuri kurarama (kubva kuna COO Gary Lipkowitz)
Mangwanani ano takaendesa mishumo kune mumwe wevatengi vedu anga ave nesu kwemakore akati wandei. Ivo vane yakakura saiti iyo yakawedzerwa mune inoenderana yekutsvaga traffic ingangoita 200% pamusoro pegore rapfuura uye vane akasiyana infographics uye whitepaper kunyengedza vatengi kunyoresa uye kutanga kutarisa mhinduro yavo. Chinhu chega chatinowana chisipo pane yavo saiti ndeye zvemukati zvemavhidhiyo Isu tinoziva, kutanga, iro vhidhiyo iri